Magaalooyinka aduunka ugu fiican ee farshaxanka wadooyinka - laga bilaabo Magaalada New York ilaa Paris
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Magaalooyinka aduunka ugu fiican ee farshaxanka wadooyinka – laga bilaabo Magaalada New York ilaa Paris
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Magaalooyinka aduunka ugu fiican ee farshaxanka wadooyinka – laga bilaabo Magaalada New York ilaa Paris
Magaalooyinka aduunka ugu fiican ee farshaxanka wadooyinka - laga bilaabo Magaalada New York ilaa Paris.
Farshaxanka waddooyinku wuxuu noqday mid caan ah, maantana waa qayb la aqbalay oo ka mid ah nolosha magaalada qarniga 21aad dad badan.
Venice ayaa qaadata kaalinta ugu sareysa, sida magaalada guud ee ugu wanaagsan fanka iyo dhaqanka aduunka. Magaaladu waxay sidoo kale hoy u tahay taallooyin iyo taallo farshaxan oo aad u farshaxanimo badan, waxayna leedahay dhismayaal ka badan qaab-dhismeed ahaan halkii milyan oo qof marka loo eego magaalooyinka kale.
Magaalada ugu quruxda badan waa Santa Fe, Maraykanka. Santa Fe ayaa sidoo kale leh matxafyada ugu badan, oo leh kuwa ugu caansan oo ay ku jiraan Matxafka Georgia O'Keeffe iyo Matxafka Farshaxanka ee New Mexico.
Vienna waxay kobcinaysaa jiilka cusub ee maskax faneedka weyn oo leh saamiga sare ee jaamacadaha farshaxanka & naqshadeynta.
Laga soo bilaabo shaqada caanka ah ee Banksy, ilaa farshaxanada firfircoon ee fanaaniinta maxalliga ah ee soo socda, farshaxanka waddooyinku wuxuu noqday mid caan ah, maantana qayb la aqbali karo oo ka mid ah nolosha magaalada qarniga 21aad dad badan.
Laakin, waa kuwee magaalooyinka horyaala fanka wadooyinka, iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu majeerto?
Dhawaan waxaan eegnay 40 magaalo oo caalami ah, oo loo yaqaan si gaar ah muuqaalkooda faneed, iyadoo la falanqeynayo magaalooyinka lagu dhejiyay #jidka ugu badan ee Instagram iyo Google waxay raadinayeen muddo sannad ah, iyagoo muujinaya magaalooyinka ugu fiican adduunka ee farshaxanka waddooyinka.
10ka magaalo ee ugu badan ee leh 'farshaxanka waddooyinka' ee Instagram-ka ugu badan
(Tirada qoraallada Instagram-ka ee muujinaya hashtagyada isticmaalaya magaca magaalada oo ay ku xigto ereyga "farshaxan waddo").
Rank dareenka Isku geynta tirada. Farshaxanka Waddo Qoraallada Instagram-ka
In kasta oo Maraykanku aanu ka mid noqonin 3-da sare, si kastaba ha ahaatee waxa ay maamuleen inta ka hadhay 10-ka sare, New York City, Miami, Los Angeles, Chicago iyo San Francisco dhamaantood waxay cadeynayaan meelaha caanka ah ee muuqaaladooda fanka.
Xarunta fanka ee caanka ah ee Paris, waxay ahayd magaalada ugu dhibcaha saraysa ee tirada sawirada fanka wadooyinka ee Instagram, iyadoo wadartoodu ahayd 64,000. Farshaxanka dariiqa ee Paris waligiis nolol iyo firfircooni uma lahayn sida uu maanta yahay, guriga fanaaniinta sida Jef Aérosol, waxaad ku arki kartaa qaar ka mid ah darbiyada ugu fiican The Canal Saint-Denis iyo Belleville park.
Berlin waxaa la ogaaday in ay leedahay barta labaad ee farshaxanka wadooyinka ee Instagram, iyada oo wadartoodu tahay 39,000. Berlin waxay ahayd caasimad la aqoonsan yahay ee fanka wadooyinka sanado badan, iyada oo fanka dariiqa ee dhanka galbeed ee gidaarka Berlin ay siisay muuqaal Instagram caan ah.
Kaalinta saddexaad waa London. Farshaxanka waddooyinka London waxa uu noqday qayb ka mid ah dabeecadda magaalada, iyada oo dalxiisayaal ka yimi adduunka oo dhan ay soo booqdaan si ay u arkaan hal-abuuro u gaar ah sida Brick Lane iyo Camden.
Cilmi baaristu waxay sidoo kale daaha ka qaaday 5 magaalo ee ugu badan ee raadiya 'farshaxanka waddooyinka':
(Tirada jeer ee magaca magaalada uu raacay ereyga "farshaxan waddo" ayaa laga baadhay Google inta u dhaxaysa Sebtembar 2020 iyo Ogosto 2021)
Rank dareenka Wadarta tirada. ee Farshaxanka Waddo Raadinta Google
Qaadashada kaalinta ugu sareysa waqtigan waa London, iyada oo wadar ahaan in ka badan 524,000 oo cilmi-baaris sanadeed ah. Magaaladu waxa ay ku faantaa qaar ka mid ah farshaxanimada cajiibka ah, maantana hagayaal badan ayaa la sameeyay si ay u caawiyaan dalxiisayaasha magaalada inay maraan qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan.
Aragti Waxbarasho Dheeraad ah:
Venice waxay qaadataa kaalinta ugu sareysa, sida magaalada guud ee ugu fiican fanka iyo dhaqanka adduunka. Magaaladu waxa ay sidoo kale hoy u tahay taallooyin iyo taallooyin farshaxan oo aad u farshaxanimo badan, waxaanay leedahay dhismayaal ka badan qaab-dhismeed ahaan halkii milyan oo qof marka loo eego magaalooyinka kale.